कुनाकानी : मेरो परिवेश: November 2010
पैसा भेटियो , के गर्ने ?
एक साँझ म नयाँबजारबाट हिँडेरै घर तिर लम्किरहेको थिएँ । सोह्रखुट्टे पाटीबाट केही अगाडी बढेकोमात्र के थिएँ, भूँइमा मेरै सामुन्ने सय रुपैयाँको नयाँ नोट लम्पसार परेर मैतिर हेरिरहेको देखेँ । एक मनले भन्यो– ′ आहा, आज त राम्रै सञ्जोग जुरेछ । ’ भेट्टाएको पैसा टिपेर खुसुक्क गोजिमा हाल्ने सुर कस्नै लागेको थिएँ । फेरी अर्को मनले भन्यो -′ अहँ, हुँदैन हुँदैन । मान्छेले भुलचुकले पैसा खसाएर गएको होला । पैसा हराएको थाहा पाएर कतै खोज्दै होला , विचरा !! सय रुपैयाँ कमाउन कति दुःख गर्नुपर्छ था’छ ? ’
′ त्यो पैसा कतै कुनै बच्चालाई आमा बुबाले पसलबाट सामान किन्न पठाएको अनि उसले खसाएको पनि त हुन सक्छ । ’ ′‘ बाटोमा कुनै सामान, साँचो, पैसा खसेर हराउँदा कतै भेटि पो हाल्छ की भनेर मैले नै कतिचोटि बाटोभरी खोजेको थिएँ कुनै बेला । हराएको चिज फेरी पाउँदा कति खुसी भइन्छ नि हकी ? यो सय रुपैयाँ खसाउने मान्छे पनि त खोज्दै होला । त्यो मान्छे यहाँ आएर त्यो पैसा पाए ...। ’
दोस्रो मनले यसो भने पछि देखेको पैसा नटिपि म सरासर अघि लम्किन्छु । पर पुगेर यसो फर्केर हेर्छु, म भन्दा पछि–पछि आउने मान्छे दायाँ बायाँ आँखा डुलाउँछन् अनि भुइँको पैसा हत्तनपत्त टिपेर गोजिभित्र राख्छन् , केही चोरे झैँ गरि फटाफट अघि बढ्छन् ।
Posted by वसन्त बलामी at 7:47 PM2comments: